विचित्र संसार Archives - Matrisandesh
लकडाउनमा तरकारी लिन निस्किए युवक विवाह गरेर दुलहीसहित फर्किए घरपछि..
एजेन्सी । लकडाउनका बेला एक व्यक्ति तरकारी र खाद्यवस्तु लिन घरबाट बाहिर निस्किएका थिए । उनी घर फर्किंदा आफूसँगै दुलही पनि ल्याए । यो अचम्मको विवाह भारतको उत्तर प्रदेशको…
तपाईलाई थाह छ ? यस्ता छन् विश्वका सबैभन्दा साना पाँच देश ।
एजेन्सी । विश्वमा अहिले १ सय ९३ देश…
घोराही । अठ्ठाइस वर्षीया अपाङ्गता भएकी महिलालाई राप्ती गाउँपालिका–१ का २१ वर्षीय समिर अलीले बलात्कार गरेको भन्दै पीडित पक्षले ०७५ पुस १८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङमा उजुरी दिए।
एजेन्सी । मुसा मार्नका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिएको समाचार सुन्दा अचम्म लाग्न सक्दछ । तर अचम्म मान्नु पर्दैन । किनकी भारतको रेलवे विभागले झण्डै साढे ५ हजार मुसा…
जापानमा नेपाली छात्राविच कुटपिट,नाकको डांडी भाच्ने दुई जना प्रहरी थुनामा
टोकियो । जापानमा अध्ययनरत एक नेपाली विद्यार्थीलाई आफ्नै तीन जना साथीले मरासन्न हुने गरि कुटपिट गरेका छन नोभेम्बर २६ तारिख मंगलवार…
सूर्य कर्पोरेशन : जापान पुर्याउन १२ लाख, पुगेपछि शरणार्थी ! (अडियोसहित)
काठमाडौं । भिसा कन्सल्टेन्सीका नाममा अनधिकृतरुपमा जापानमा मानिस पठाउने…
अर्घाखाँची समाज जापानको तेश्रो अधिबेशन जनवरी २ मा हुने
टोकियो । अर्घाखाँची समाज जापानको तेश्रो अधिबेशन आगामी जनवरी २ तारिख टोकियोमा हुने भएको छ ।
यही नोभेम्बर १३ टोकियोमा बसेको कार्यसमितिको नियामित बैठले उक्त निर्णय गरेको हो । बैठकले…
सूर्य कर्पोरेशनले गर्यो भिसा कन्सल्टेन्सीका नाममा अवैध धन्दा
काठमाडौं । सूर्य कर्पोरेसनले भिसा कन्सल्टेन्सीका नाममा जापानमा अनधिकृतरुपमा मानिस…
टोकियो । नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाले आगामी २४ तारिख आईतबार पत्रकारहरु लक्षित ‘पुनर्ताजगी तथा क्षमता अभिवृद्दी अनुशिक्षण’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जापानको, आचार संहिता,…
धादिङ् समाज जापानद्वारा असहायका लागी स्ट्रिट टु होमलाई सहयोग
टोकियो । धादिङ् समाज जापानले, सडक बालबालिकाहरु तथा असाहय व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्दै आएको संस्था सडक बाट घर स्ट्रिट टु होमलाई भौतिक सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेको छ ।
सहयोगाक्षिलाई, क्षणिक केहि दान…
जापानको सेन्दाइमा २६ वर्षीय नेपाली विद्यार्थीको ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु
टोकियो । जापानको सेन्दाइमा एक २६ वर्षीय नेपाली विद्यार्थीको ट्रकको ठक्करबाट मृत्यु भएके छ ।
जापानको सेन्दाइस्थित जापानी भाषा स्कुलमा पढ़दै गरेका नेपन पोखराका २६ वर्षीय चिरञ्जीवि गिरीको ट्रकको ठक्करबाट…
गायक रत्न बाँनियाको उपचार खर्च जुटाउन जापानमा सहयोग अभियान
जापान। पुराना गायक एवं कलाकार रत्न बाँनिया यति वेला दुवै मृगौला फेल भएर अस्पतालको शैंयामा छन् । उपचार गराउदा -गराउदा उनको आर्थिक अवस्था नाजुक भैसकेको छ ।
कर्णप्रिय गीतहरु लडाईको…
टोकियोमा शुभकामना तथा सामुहिक म्हः पूजा कार्यक्रम सम्पन्न
टोकियो ।नेवाः अन्तर्राष्ट्रिय फोरम जापानले गत शनिवार नेपाल सम्वत ११४० शुभकामना आदन प्रदान तथा सामुहिक म्हः पूजा कार्यक्रम…
तामाङ समाज जापानको सातौं अधिवेशन डिसेम्बर २९ मा हुने
टोकियो । नेपाल तामाङ समाज जापान केन्द्रीय समिति (एनपिओ होउजिन) को सातौं…
टोकियोमा नेपाल मगर संघको वृहत देउँसी भैलो कार्यक्रम हुने
टोकियो । जापानको राजधानी टोकियोमा नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व दीपावली (तिहार )को बिशेष अवसरमा…
पत्रकार महासंघको चुनाव एक महिनापछि सर्‍यो
राई यायोक्खाले टोकियोमा भब्य मनायो उभौली साकेला